3 izizathu zokuthi ungadonsela abantu abangalungile empilweni yakho — Biologique
Abundance yoga and meditation retreat in Ojai, Califor
3 izizathu zokuthi ungadonsela abantu abangalungile empilweni yakho
isithombe ngemifanekiso ye-getty
Ngezinye izikhathi ezimpilweni zethu, kufanele sibukeze ukuziphatha kwethu nokuziphatha kwabantu emiphakathini yethu.
Kungase kwenzeke ngokucindezela okungase kufike ngendlela yokukhaphela noma ukungathembi. Noma, kungase kufike esikhathini esithile ekuphileni kwethu lapho sizizwa singaphelele noma sizizwa sengathi asikho ukuxhumana kwangempela nabantu ezimpilweni zethu.
Ngingumqine-okholwayo ekutholeni i-detoxing. Ukuxosha ingqondo yakho, umzimba nomphefumulo wakho. Futhi, ngezinye izikhathi uvumela ukuhamba kubangane, izinto nabantu abakulimazayo. Uma sesiyi-detox, kubalulekile ukuthi sicabange ukuthi kungani sakha umuntu noma isimo ukuze siqale.
Kungenzeka kube yilezi ezilandelayo:
1. Wena, wena ngokwakho, unomkhuba wokuba ungahambi kahle.
Nganginomthengi owelele ekutheni abe nombi, okuvamile. Ngaphawula ukuthi uzokwenzela abanye ukunganaki futhi ngakho-ke, uzodonsela ukungabi nalutho. Ngamtshela, futhi manje nginitshela ukuthi kubalulekile ukuqaphela imikhuba yakho njengoba sivame ukuheha ukuziphatha okufanayo njengoba sesisetshenzisiwe. Wayengazi ukuthi udale leli phethini. Lokhu kwakuneminyaka emibili eyedlule futhi manje usezindaweni ezijabulisayo futhi ezungezwe abantu abahle nabathintekayo. Uma ngihlala naye, uyambonga kakhulu iseluleko engamnika sona njengoba engazi. Abanye benu bangase babe nomqondo, ngakho-ke banakekele abantu abakuzungezile.
2. Ungabeki ubungane ngokuhleba nokukhuluma okubi.
Lokhu into engikufundile, futhi! Ngesikhathi sasebusika, ngazithola ngikhathazekile ngomsebenzi wokuthi nganquma ukushiya futhi phakathi naleso sikhathi sokukhungatheka, ngangibe umngane nomunye umuntu engisebenza naye. Sichitha isikhathi sethu sikhuluma kabi ngaleyo ndawo nezimo zethu. Lokhu kubangela isisekelo sobuhlobo esakhiwe phezu kokungabi nandaba. Njengabo bonke ubudlelwane, badinga ukuba nesisekelo seqiniso, uthando nokuzwela - hhayi ngenkulumo enenzondo noma edumazayo. Ubuhlobo obufana nalokhu abuyaphila. Kungaba okuhlukile uma sisekela ngesikhathi esiyinkimbinkimbi ngokuqinisekisa futhi sibe nethemba ngekusasa; Nokho, sichitha isikhathi esiningi sokuhlala kulokho okwenziwe kithi.
3. Imingcele engcolile
Imingcele ibaluleke kakhulu, ibaluleke kakhulu. Angikwazi ukuphindaphinda lokhu okwanele. Ngithanda ukusebenzisa isifaniso lapho umuntu engena endlini yakho, athanda i-intercom, bese ehamba ngesango / emnyango lapho omunye umnyango ongena endlini yakho / indlu, kulungile? Lokhu kufanele kube okufanayo empilweni yakho. Uma uhlangana nomuntu, akufanele bakwazi ukwazi konke ngawe futhi ukwazi ukubizwa ngokuthi umngane ngesikhathi esheshayo. Njengoba kunabantu abesabekayo nabakhuthazayo, kukhona abantu ababi abangakuhlehlisa futhi. Thatha isikhathi sakho nabangane abasha bese uqala ukuqaphela ukuthi ngabe umuntu ufanele yini ukuthembela futhi ufanele ukuba nomngane wakhe.Sivame ukuvumela abantu empilweni yethu ngokushesha ukuba babone ukuthi bangobani baze bahambe. Qaphela ngokuqaphela ukuthi ubani ovumela impilo yakho ngokuyithatha kancane futhi ungesabi ukubona ukuthi omunye umuntu akahle yini kuwe.
Newer Post10 encouraging quotes by Trevor Noah
Older Post4 magical things that happened when I let go of needing to control everything.